August 2016 – Radio KeyFM
Dhagayso : Naafada Mandera oo aan ka qayb galay Tartarnka Baasikiilada Isiolo
31st August 2016	Somali Language 0
Naafada Mandera ayaa isku soo baxay iyaga oo ka cabanaya in wax taageero ah aysan ka helin dowlada kowntiga. Tartanka baasikiilayda naafada ee ka dhacaya Isiolo 3-da September ayay sheegeen in aysan ka qayb galayn. Faahfaahin la xiriirta warkani waxaa inoo soo diray Ibrahim Happy
Ganacsatada Suuqyada Waaweyn ee Islii oo shaqo Joojin ku dhaqaaqay
Waxaa manta xiran suuqyada waaweyn ee loo yaqaan Malls-ka ee ku yaala xaafada Islii,waxaana ay ka cabanayaan ganacsatada suuqyadaasi waratada oo dhibaato ku haya ganacsigooda. Ganacsiyada ku yaala wadada loo yaqaan Firs Avenue ee xaafada Islii ayaa xiran. Ganacsatada ayaa xiligan shir jaraa’id ku qabanayo Hotel Nomad oo ay uga …
Afhayeenkii Kooxda IS oo la dilay
31st August 2016	Uncategorised 0
Abu Maxamed Al-Cadnani oo ahaa afhayeenka ururka IS ayaa lagu dilay iska hor imaad ka dhacay gobolka Xaleb, sida lagu shaaciyay Amaq . Ururka isku magacaabay dowladda Islaamiga ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uu ka geeriyooda sarkaalkaasi,kuna dhintay gudaha Siiriya. Kooxda IS ayaan shaacin wakhtiga la dilay hogaamiyahaasi. …
Siyaasiyiin uu kamid yahay Sonko oo iska kaashanaya Tartanka Gavanaha Nairobi
Labo kamid ah u tartamayaasha jagada gavanaha Nairobi doorashada 2017 ayaa ku dhawaaqay in ay si wada jir ah u shaqaynayaan si ay u difaacaan kursiga. Xildhibaanka Dagoretti Dennis Wawerui iyo mudanaha lasoo magacaabay Johnson Sakaja ayaa sheegay shalay in ay u midoobayaan sidii meesha looga saari lahaa gavanaha xilka …
Madaxweynihii hore ee Kenya Mwia Kibaki oo laga saaray Cisbitaalka
Madaxweynihii hore Kenya Mwai Kibaki ayaa laga saaray cisbitaalkii Koonfur Afrika ee loogu sameeyay qaliinka todobaadkii aynu soo dhaafnay. Mr Kibaki ayaa ka baxay cisbitaalka Netcare Sunnighill Hospital ee Johannesburg,halkaasi oo 10 kii maalmood ee u dambeeyay uu ku jiray. Madaxweynaha howl gabka Kenya ayaa lagu sameeyay qaliin xinjirta dhiiga …
Hogaamiyayaasha Isiolo oo Difaacay Wasiirka Ciyaaraha Kenya
Hogaamiyayaasha Isiolo ayaa meesha ka saaray eedaha loo jeedinayo wasiirka ciyaaraha dalkani Kenya Hassan Wario,waxaana iyaga oo difaacaya ay sheegeen in aanu wax khalad ah samayn. Gavanaha Isiolo Godana Doyo iyo musharaxa jagada gavanaha Adan Kabelo ayaa sheegay eedaha maamul xumida ee kooxda Kenya soo food saartay ciyaarihii Olympics …
Xaalada Deegaanadii lagu dagaalamay Wajir oo Degen
Waxaa degen xaalada deegaanadii ay ka dheceen weerarada salka ku haya qabiilka ee maalmihii aynu soo dhaafnay saameeyay degmooyinka Eldas iyo Waqooyiga Wajir. Gudoomiyaha amaanka Wajir Michael Tialal ayaa shalay sheegay in ay xoojiyeen amaanka,gaar ahaan goobaha ay weeraradu ka dhaceen. Tialal ayaa sheegay dowladu in aysan fiirsanayn shakhsiyaad kooban …
Maamulka kowntiga Isiolo oo wada qorshaha dhismaha Jaamacadii ugu horeysay kowntiga
Dowlada kowntiga Isolo ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay ku doonayso in ay ku aas aasto jaamacadii ugu horaysay ee deegaanku yeesho. Isaga oo ka hadlayay xili uu bixinayay lacaga deeqaha waxbarasho oo Sh35 million oo shilin ah ayaa gavana Godana Doyo uu sheegay in qorshe howleedka lagu cayimayo soo ururinta …
Xildhibaan Walaac ka qaba Sonko oo isaga taga Jubilee
30th August 2016	Somali Language 0
Xildhibaan ka tirsan xisbiga Jubilee ayaa sheegay in ay cabsi ka qabaan in Senator-ka magaaladan Nairobi, Mike Sonko uu iskaga baxo xisbiga talada haya ee Jubilee . Xildhibaanka laga soo doorto degmada Starehe ,Maina Kamanda ayaa ka codsaday xisbiga Jubilee in ay si xor iyo cadaalad ah ku sameeyaan cidda …
Saraakiil ka tirsan Taraafikada oo loo haysto halka ay ka keeneen Malaayiin Shilinka Kenya
Dhowr sarkaal oo ka tirsan waaxda taraafikada booliska Kenya,gaar ahaan gobolka Rift Valley ayaa su’aalo lagu weydiiyay Nakuru,lana xiriirta dhaqaalaha u kaydsan iyo aqoontooda. Agnes Chebii oo ka tirsan ciidamadda wadooyinka ayaa laga dalbay in ay sida ugu dhakhsiiyaha badan ay kaga soo war bixiso 59 million oo shilin oo …